Jin Sun-kyu – Stars – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
The Villagers (2018) Unicode The Villagers ဇာတျကားလေးကတော့ တျောတျောလေး ကောငျးပါတယျ။အကျရှငျ သညျးထိတျရငျဖို ဇာတျ ကားေ ကာငျးကွိုကျတဲ့ သူတှေ မလှတျတမျးကွညျ့သငျ့ပါတယျ။ဒီဇာတျကားမှာတော့ Ma Dong-seok က ဇာတျလိုကျ မငျး သားနရောကနေ ပါဝငျထားပါတယျ။သူ့ရဲ့ ဇာတျကားဆိုတော့ တိုကျခိုကျတဲ့ အခနျးတှေ မပါ မှာတော့ စိတျပူ စရာမလို ပါဘူး။ကာယဆရာ(ကြောငျးကို ပေးစရာ အကွှေးကနျြတဲ့ ကြောငျးသား၊ကြောငျးသူတှကေို ကွှေး လိုကျ တောငျး)အဖွ ဈနဲ့ နယျက မွို့ သေးသေးလေးမှာ အလုပျဝငျခဲ့ပါတယျ။အဲ့ဒီကြောငျးက ကြောငျးသူတဈယောကျ ပြောကျ ဆုံးတဲ့ အမှုကို ဝငျပါရငျးနဲ့ ဘယျလို မြိုး အရာတှကေို ရှာတှေ့ သှားမလဲ ဆိုတာကိုတော့ ……။ Credit Review ဒီဇာတျကားကို ဘာသာပွနျပေးသူကတော့ Kyamtrapvibe ဖွဈပါတယျ Zawgyi The Villagers ဇာတ်ကားလေးကတော့ တော်တော်လေး ကောင်းပါတယ်။အက်ရှင် သည်းထိတ်ရင်ဖို ဇာတ် ကားေ ...
IMDB: 5.7/10 218 votes
The Outlaws (2017) ချိုင်းနား​တောင်း ဂါရီဘွန်​ရပ်​ကွက်​ ! ဒီရပ်​ကွက်​ဟာ တရုတ်​-ကိုရီးယား ကပြား​တွေ စု​ပေါင်း​နေထိုင်​တဲ့​နေရာ​လေးတစ်​ခု... ဒီရပ်​ကွက်​မှာ ကပြားဂိုဏ်းစတား​တွေက ကိုယ်​စီကိုယ်​စီ ဂိုဏ်း​တွေထူ​ထောင်​ပြီး သူ့​အပိုင်​နဲ့ သူ အုပ်​ချုပ်​ကြတယ်​...သူတစ်​လူ ငါတစ်​မင်းဆိုပါ​တော့... ဒါ​ပေမဲ့ လက်​သံ​ပြောင်​တဲ့ စုံ​ထောက်​မားကို​တော့ သူတို့အကုန်​လုံး ​ကြောက်​ကြရတယ်​... တစ်​​နေ့မှာ​တော့ တရုတ်​က​နေ ခိုးဝင်​လာတဲ့ ဆရာသမား​တွေ​ရောက်​လာတယ်​... လာတာ​က ဆရာရယ်​ တပည့်​နှစ်​​ယောက်​ရယ်​ ... ဆရာနာမည်​က ဂျန်​ချန်း တဲ့ ! ​သွေး​အေးတယ်​... ရက်​စက်​တယ်​... ပိုက်​ဆံရဖို့အတွက်​ဆိုရင်​ လက်​မရွံ့ဘူး... သူ့တပည့်​ ၂ ​ယောက်​ကလည်း သူ့ဆရာအတိုင်းပဲ ... ဒီ​ကောင်​​တွေ ၃ ​ကောင်​က ဂါရီဘွန်​ရပ်​ကွက်​​လေးထဲ ​ရောက်​လာတယ်​... အဲ့ဒီမှာ ဆရာ​ကောင်​​တွေကို ​ရှော့ပြီး သူတို့​တွေရဲ့ ​နေရာကို ဂျန်ချန်းတို့ ဆရာတပည့်(၃)ေ​​​​ယာက်​က အပိုင်​စီးလိုက်​တယ်​... ဒီရပ်​ကွက်​မှာ ​ရောင်းသမျှ ​ဈေးသည်​တိုင်းက သူ့ကို အခွန်​​ပေးရတယ်​... ​နောက်​ပိုင်း ဂျန်​ချန်းက တပည့်​​တွေ​မွေးပြီး သူ့တပည့်​​တွေကို လတိုင်း ​ဆက်​​ကြေးလိုက်​​ကောက်​ခိုင်းတယ်​... ဆို​​တော့ကာ ...